मृगौलालाई असर गर्ने खानाहरु जो तपाईले बुझ्नु अतिनै जरुरी छ!! – News Nepali Dainik
मृगौलालाई असर गर्ने खानाहरु जो तपाईले बुझ्नु अतिनै जरुरी छ!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: २०:३६:२९
सर्वप्रथम नुन अथवा सोडियम : नुनमा सोडियम को मात्रा बढी हुने गर्दछ। सोडियमको मात्रा शरीरमा बढ्ने बितिक्कै किड्नी मै पहिलो असर गर्न सुरु हुन्छ‌। हाम्रो खानाहरु मा नेचुरल सोडियम को मात्रा हुन्छ । त्यसैले धेरै सोडियम को खपत गर्नु किड्नीको लागी खतरा हुन्छ।
एउटा जवान मानिसले दिनमा १ चम्चा नुन अर्थात ६ ग्राम नुन खानु भनिन्छ। ६ ग्राम नुन मा २।४ ग्राम सोडीयम पाइन्छ। २।४ ग्राम सोडियम एकदिनको लागी एउटा जवान मानिसको लागी प्रसस्त हुन्छ। त्यसैगरी बाल बच्चाहरुको उमेर अनुसार नुन खानु पर्छ।
तपाइँलाई लाग्न सक्छ कि अहिलेसम्म के हि भएको छैन अब के होला रु तर याद राख्नुहोस तपाइको उमेर संगै तपाइको शरिर को अंगहरुको पनि उमेर बढ्दै छ र अङ्गहरुले काम गर्न सक्ने छ्यमता दिनानुदिन घट्ने क्रममा छ।
पेय पदार्थमा चिनि को मात्रा अत्याधिक बढी हुन्छ र साथमा शरीर को सोचाइको मात्रा पनी अत्याधिक रहेको हुन्छ। यदि नियमित पेप्सी वा सोडा जन्य पदार्थ पिउनुहुन्छ भने तपाँईलाई‌ किड्नीमा स्टोन हुन थालिहाल्छ।
केहि मानिसहरु रमाइलो र ठण्डा को लागि कोल्ड ड्रिंक पिउछन भने केहि मानिसहरू इज्जत देखाउनको लागी पेप्सीहरू, इनर्जी ड्रिङकहरू पिउने गर्दछन।
हाईप्रोटीन, र हाईफस्फोरस बढी भएका खानाहरू किड्नी ले छान्न सक्दैन। किड्नीलाई अत्याधिक भार पर्दछ हाई प्रोटिन फिल्टर गर्नलाई र किडनी ड्यामेज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ।‌
माछा मासु अत्याधिक खाने मानिसहरुमा किड्नी को समस्या हुन्छ। त्यसैले गर्दा खानामा सागपातलाई धेरै ध्यान दिनुपर्दछ।
माछा मासु पनी खानुपर्दछ तर ठिक्क लिमिट मा खानुपर्दछ। यी खानाहरूलाई‌ सुधार गर्न सके तपाँईको मृगौला स्वस्थ्य रहन्छ।
चिया,कफी,इनर्जी ड्रीक,सोडाहरूमा धेरै क्याफिन पाइन्छ। क्याफिन भनेको एक किसिमको उत्तेजक रसायन हो।
क्याफिनले मृगौलामा रक्त सञ्चार बढाई दिन्छ। क्याफिनले मृगौलामा रक्त सञ्चार बढाई दिन्छ । जसले गर्दा मृगौलामा स्टोन हुने वा ड्यामेज हुने सम्भावना धरै हुन्छ।
Last Updated on: March 16th, 2021 at 8:36 pm